Godoria / Doumeira waxay ka kooban tahay dhul xeebeed ballaadhan oo u dhaxeeya xudduudda Jabuuti iyo Eritrea iyada oo jasiiradda hoose ee Doumeira ee waqooyiga ku taala buurta buuran, iyo buurta Ras Siyyan oo koonfur ah iyaga oo sii dheereynaya Godoria mangroves. Tani waxay qayb ka tahay duulimaadka Rift Valley / Red Sea, oo ah tii labaad ee ugu muhiimsan ee shimbiraha shimbiraha ah ee adduunka ku nool, waana diiradda qorshaha ilaalinta ee Birdlife si ay u guurto shimbiraha qulqulaya (http://www.birdlife.org/ Migratorysoaringbirds/). In kabadan 1.5 malyan oo shimbir ah oo shimbir ah oo ka kooban 37 nooc (oo ay ku jiraan 5 caalami ah oo loo hanjabay noocyada) ayaa isticmaala cidhiidhiyada sanad walba si ay u guuraan inta u dhaxaysa Eurasia iyo Afrika. Baaskiilku waa daruuri muhim u ah guuritaanka sababta oo ah waa biyaha ugu gaaban oo ka gudbaya koonfurta Suez, dhinaca Jabuuti waa degaan Muhiim ah oo Bird ah (IBA), laakiin wax yar laguma darin. Macluumaadku wuxuu ka yimaadaa daraasooyinka dayrta 1985 iyo 1987; iyo gugii 1990 iyo shaqadeena ee 2013 (http://egyptianvulturedjibouti.blogspot.co.at/). In kabadan 240,000 oo shilin ah oo ah 28 nooc ayaa laga diiwaan geliyay dayrta hal mar (Welch iyo Welch 1988), badhkeedkii iyo badhkeedkii hore, laakiin sidoo kale xakameyn (NT), gorgortan weyn (VU), geedka barbaraha ah (VU). iyo Kestrel ka yar (VU), iyo gu’gii tiro badan oo ah bacaha Masaarida (EN) iyo baqarada la gooyey ayaa lagu tiriyey mudaharaadyo kooban (Welch iyo Welch 1991, McGrady et al 2013).
Marka lagu daro raptors, aagga waxaa loo isticmaalaa xayawaan, shimbiro, pelicans, shimbir-cunleyda, qoryaha, wareegyada, liqidda, martida, baaskiiladaha, iyo wadayaasha.
Intaa waxaa dheer, goobta waxay taageertaa tarbiyada dadyowga ku nool dhulka hoostiisa iyo jasiiradaha, gumeysiga yurubiyanka, bambo gacmeedyada mangroves iyo noocyada shimbiraha caadiga ah ee ku yaal bada xeebta sida hoopoe lark, lakabka madow ee caleemaha madow iyo lamadegaan. Waxay sidoo kale taageertaa seebirdhyada sida caato-dabajoog ah iyo dad aad u tiro badan oo ka mid ah dib u soo celi (5600+, 1987, Welch iyo Welch, 1988).